Ukulungisa i-HomePod mini ngaphandle kwewaranti ayifanelekanga | Ndisuka mac
Ukulungisa iwaranti engapheliyo ye-HomePod mini ayifanele
Kuyinyani ukuba uninzi lwenu luya kuba lucinga ukuba oku akukho ngqiqweni ngoku kuba i-HomePod mini ayikafiki kubaninizo, kodwa kubalulekile Yazi amaxabiso iApple anayo njengenkonzo esemthethweni xa kufuneka ulungise i-HomePod mini ngaphandle kwewaranti.
Singatsho ukuba ayikufanelanga ngokuthe ngqo ukulungiswa, kucacile. Lakuba liphelile ixesha elisemthethweni lezixhobo zokusebenza, kufuneka senze ntoni kwimeko yeengxaki kukuthenga ngokuthe ngqo enye IPodPod encinci entsha kwaye ngoku siyacacisa ukuba kutheni ...
I-91,10 euro yexabiso lokulungisa sisizathu
Akukho mfuneko yokwazi ukuba iApple ihlengahlengise amaxabiso kwimeko yokulungisa i-iPhone screen, ibhetri okanye izinto ezinje. Kodwa kwimeko ye-MiniPod mini encinci, ixabiso lokuhlawula ngaphandle kwewaranti esemthethweni yi-91,10 euro, ke Akufanelekanga ukulungiswa ngokuqwalasela ukuba ixabiso elisemthethweni le-HomePod mini ngama-99 euros.
Isizathu singaphezulu kokucacileyo kwaye siyacinga ukuba iApple ikwenza oko ukukunika ngokuthe ngqo isithethi esilungisiweyo ngenxa yeengxaki abanokuba nazo xa belungisa okanye besombulula isiphoso kwesi sithethi sincinci. Okucacileyo kukuba ukuba sinesivumelwano ngeAppleCare + ngomonakalo owenzeke ngengozi, ixabisa i-15 euros, into eyamkelekileyo nenomdla ngokwenene, ingxaki ziindleko zale Apple "inshurensi" esemthethweni. Yiba njalo emva kwexesha elizayo yazi amaxabiso okulungisa asemthethweni ezi HomePods zincinci, kungcono ulumke ngayo ukuze ingaphuli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Ukulungisa iwaranti engapheliyo ye-HomePod mini ayifanele
UMicrosoft uqalise i-beta yokuqala yeOfisi ehambelana neApple Silicon
Inkqubo yeApple TV ngoku iyafumaneka kwiPS4 nakwiPS5